Venezoela: Iria Puyosa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2018 11:53 GMT
Mialohan'ny Andro natokana ho an'ny blaogy tamin'ny 2006, niteraka valiny mikasika ireo andiam-panontaniana momba ny fomba sy antony mahatonga ireo blaogera manerantany handany fotoana maro amina asa iray tsy mitondra inona akory i Rebecca MacKinnon. Toy izao no navalin'i Iria Puyosa, Venezoelana, mpiara-miasa ao amin'ny Global Voices.
* Nanomboka voalohany ny bilaogiko aho satria nila habaka sosialy iray mba hizarako ireo hevitro mikasika ny zavatra nofinofy sy ireo lohahevitra hafa nahasarika ahy, nefa tsy nananako fotoana akory ny hampivoatra azy ara-dalàna.
* Tànako hatrany ny blaogiko mikasika ny nofinofy, Rulemanes para Telémaco, izay anoratako indrindra ny mikasika ny literatiora sy ny sarimihetsika, nefa voasarik'ireo lohahevitra hafa ihany koa aho, avy amin'ny baolina kitra mankamin'ny fahalalahana hahazo vaovao ary ireo fivahinianako.
Folo volana lasa izay, nanokatra blaogy iray hafa aho, Reste@dos , izay nitsikerako mikasika ny fandraisana anjara ataon'ny olom-pirenena sy ireo politisiana Venezoeliàna.
Ary iray volana latsaka izay, nandefa ny No suma cero aho, izay antenaiko fatratra, ho fikotrehana tetikasa iraisana mifandraika amin'ny fitantanana ireo fahalalana, topimaso amin'ny tontolo iainana ho amin'ny sehatra fandraharahana, ary ireo tambajotra sosialy.
*Manoratra amin'ny fiteny Espanola aho satria io no fiteny tena folako ary io no fitenin'ny olona izay mahasarika ahy ny miresaka aminy. Indraindray aho manoratra amin'ny teny anglisy – eo amin'ny Global Voices – satria mahaliana ahy ny fiandraiketana ny anjara asan'ny tetezana eo amin'ireo vondrona samihafa zarazarain'ny fiteny, ny tranga misy eto.
* Sarotra ny miteny ireo faharisihana manokana tsy ampiasàna ireo resaka tsy misy fotony fanao andavanandro. Heveriko fa tiako ny mamporisika ireo fifanakalozan-kevitra ary tsy menatra kokoa aho rehefa manoratra.
* Sarotra amiko ny hanondro an'ireo izay mamaky sy mitsikera ireo blaogiko toy ny hoe “mpihaino ahy” ; tonga ato amiko sahala amin'ny “medioma iray, mpandray marobe” io, ary tsy izay ilay hevitra. Etsy andaniny, ny olona izay miresaka ny Rulemanes para Telémaco dia avy aminà firenena samihafa, Meksiko sy Espaina no anisan'ireo lohalaharana amin'izany; nahita koa aho fa maro (toa ahy) no monina any amin'ireo firenena hafa noho izay nahaterahany. Nefa na izany aza, vohikala anisany tena mahasarika ireo Venezoeliàna ny Reste@dos. Mbola toa zaza mianatra mandeha ny No suma cero noho izany tsy manan-kevitra aho hoe ahoana no mety hahatonga azy ho fifangaroanà firenena maro na ho an'ny eo an-toerana; nandritra ireo herinandro telo voalohany, ny antsasaky ny fitsidihana dia avy any Etazonia avokoa.
* Mahatsapa aho fa tsy miraharaha ny asa amin'ny blaogiko ny fianakaviako na dia mieritreritra aza aho hoe nanasa azy ireo mba hahalala bebe kokoa ireo blaogy fony aho nandefa azy ireny. Ny ankamaroan'ny fianakaviako dia tsy mamaky koa ireo weblaogy nataoko (tsy maningana anatin'ny maro ny ahy) ; Mihevitra aho fa ireo namana vitsivitsy izay mamaky ireo blaogiko dia manasokajy azy ho toy ny iray amin'ireo toetrako manahirana marobe (ny fiavahana, izay tsy tena ilay mahazendana indrindra).
* Tsy tena manana “lehibe” aho ary tsy haiko hoe ahoana no famaly ny fanontaniana hahafantarana raha toa mahafantatra ny (ireo) blaogiko ny lehibeko na tsia. Mety ho mpamaky tsy mitonona anarana ve ny filohan'ny Anjerimanontolo Foibe ao Venezoela?
* Sahala amin'ny toa vao haingana no nahafantatra ireo media venezoelana hoe misy ireo blaogy. Eritreretiko fa tao amin'ny Washington Post na tao amin'ny El Mundo de España no namakian-dry zareo momba azy io, na mety tao amin'ny Clarín. Tsy eritreretiko mihitsy hatreto hoe hitan'izy ireo fa misy blaogy venezoeliàna manakaiky ny telo arivo, ireo sasany misy mpitsidika telo arivo eo ho eo isanandro. Ho tsikaritr'izy ireo izany indray andro any, raha ny hevitro.
* Mihevitra aho fa toa mikisaka ho amin'ny fitenenana irery ireo zavatra soratako; mba hahatonga azy ireny ho fifanakalozan-dresaka, mila mpiresaka liana aminy izy ireo. Indraindray hitako izy ireny ary indraindray tsy hitako. Ny famaritana [ny blaogy] dia zava-dehibe sahala amin'ny tanjona iray anaty lalao, fa tsy ny isa azo farany.
* Tsy mihevitra aho hoe hisy fiantraikany goavana eo amin'ny hevi-bahoaka sy ny adihevitra politika ireo blaogy venezoeliàna ; Efa nambarako fa tsy miraharaha anay ireo media goavana.